संक्रमितबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा त्रुटि ! – indepth.com.np
संक्रमितबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा त्रुटि !
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १९:०९
भक्तपुरमा भनियो ८६, विवरण भने ७८ को मात्रै
भक्तपुर । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको भक्तपुरको तथ्यांक मंगलबार पनि त्रुटिपूर्ण रह्यो । मंगलबार मन्त्रालयले भक्तपुरमा ८६ जना नयाँ संक्रमित थपिएको पत्रकार सम्मेलन गरेरै जानकारी दिएको थियो ।
तर त्यहीं मन्त्रालयले भक्तपुरमा जम्मा ७८ जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मात्रै विवरण पठायो । उक्त विवरणमा पनि ३ जना संक्रमित त सम्पर्कमै नआएको स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार मंगलबार ७८ जना नयाँ थपिएसँगै भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एकहजार एकसय १२ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा भक्तपुरमा ४९ पुरुष र ३७ महिला गरी ८६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको बताएको थियो । तर भक्तपुरमा ७८ जनाको मात्रै विवरण प्राप्त भएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरकी जनस्वास्थ्य अधिकृत निष्ठा बल्लले मंगलबार भक्तपुरका चार नपामध्ये सबैभन्दा बढी मध्यपुर थिमि नपामा २० महिला र ३५ पुरुष गरी ५५ जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिए ।
मध्यपुर थिमि नपा भक्तपुरकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको नपामा हो । यहाँ मंगलबारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४ सय ६४ पुगेको छ ।
यसपछि भक्तपुर नपामा संक्रमितको संख्या बढी रहेको छ । यहाँ मंगलबार १० महिला र ६ पुरुष गरी १६ जना नयाँ संक्रमित थपिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत बल्लले बताइन् । यससँगै यहाँ संक्रमितको संख्या २ सय ७८ पुगेको छ ।
त्यस्तै मंगलबार सूर्यविनायक नपामा २ महिला र चाँगुनारायण नपामा २ पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको उनले जानकारी दिइन् । यससँगै सूर्यविनायक नपामा २ सय ३२ र चाँगुनारायण नपामा एकसय २५ जना कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पुगेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मंगलबार तीनजना संक्रमित सम्पर्कमा आएनन् । यससँगै भक्तपुरमा १७ जना संक्रमितलाई अहिलेसम्म सम्पर्क गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भक्तपुरमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणले १६ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा ११ पुरुष र ५ महिला रहेका छन् ।
भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण भएको मृत्युदर १.४ प्रतिशत रहेको छ । जबकि नेपालमा यो दर ०.६५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।
संक्रमणको कारण मृत्यु भएका १६ जनामध्ये मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मात्रै ७ पुरुष र ३ महिला गरी १० जना रहेका छन् ।
त्यस्तै सूर्यविनायक नपाका २ पुरुष र २ महिला गरी ४ जना तथा भक्तपुर नपाका २ पुरुषले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण ज्यान गुमाएको कार्यालयले जनाएको छ ।
भक्तपुरमा एकैदिन दुई संक्रमितको मृत्यु